လဥတစ်လုံးပဲရှိသော သမ္မတကြီးသို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လဥတစ်လုံးပဲရှိသော သမ္မတကြီးသို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
Posted by phone_kyaw on Feb 27, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
ဟိုလူကြီး ဂွေးအုမပါတာ သူသိတယ်တော့..
သူလဲ ဒို့ လိုပဲ အီးပေတာပဲနော့..ဘာတဲ့ အာပီဂျေ ၅-ကိုထမ်းပြီး ဖင်မှ ချီးထွက်သည့်အထိ မွန်ပြည်နယ်ထဲတွင် ပတ်ပြေးခဲ့ဖူးတယ် ဆိုပဲ
ကျန်တာတော့ နားမလည်လို့ ..ဆက်ပြောကြပါဦး.
ဒီလိုလေးတွေ ရေးပါ။ အသားလွတ်ဆဲတာထက် (မှန်တာ မှားတာ အပထား) အချက်အလက် အနှစ်အသားလေးထည့်ပြီး ဆဲတာဖြစ်ဖြစ်ရေးတာဖြစ်ဖြစ်တော့ လုပ်ပေါ့။ မတူသော အတွေးတွေးတာတွေးခွင့်ရှိပါတယ်။ မရမ်းကားဖို့ပဲလိုတာပါ။
( ဒီဆိုဒ်မှာမရမ်းကားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာ မရမ်းကားသင့်ကြောင်းပြောတာပါ။ ဒီဆိုက်ကတော့ ကိုယ့်ဆိုက်မဟုတ်တော့ ပြောခွင့်မရှိပါ။)
ကိုဖုန်းကျော်ရေ၊ပြည်သူတွေလည်း၊ခင်ဗျားပြောတဲ့နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကအကြံပြုချက်အတိုင်းစိတ်ကူးယာဉ် နေတာပါပဲ။သို့သော်၊ ခင်ဗျားအထက်မှတွေးမြင်သလို သူတို့ဟာသူတို့ပါပဲမို့လို့၊ ခက်ခဲအုန်းမှာပါ၊ကျနော်တို့ရီဘော်လူးရှင်းမှတစ်ဆင့်တက်လာတဲ့ အီဘော်လူးရှင်းတော့ရောက်ပါပြီ၊ဒါပေမဲ့
ခုမှ တစ်ကယ့်နိုင်ငံရေးပုံစံတိုက်ပွဲစမှာ မို့လို့ တော်တော်ကျိုးစားကြရအုန်းမှာပါဗျာ။
ဟိုးတုန်းကဆို ကျနော်လည်းတွေးမိတာ၊ သည်လောက်ရှိလှတယ် ကွာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုအနုမြူဘုံးအလုံး (20)လောက်ချပစ်လိုက်စမ်းပါ၊ငါလည်းသေရင်သေပေ့စေ။မြန်မာတွေညံ့ လွန်း ၊အတ္တကြီးလွန်းပြီး ၊ဖေါ်လို လိုက်လွန်း တယ်ဆိုစိတ်မရှေခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာလေ ခင်ဗျားမြင်သလိုပဲ ကျုပ်တို့အင်အားစုတွေက ၊ကိုယ့်
ဇတ်မှာကိုယ်ဆရာလုပ်ချင်သူတွေများတော့၊ တစ်စုတစ်စည်းထဲတစ်လမ်းထဲမသွားကြတာဟာအား နဲချက် ပါပဲခုတောင်ပါတီပေါင်း(19)ခုယှဉ်ပြိုင်မတဲ့ဗျား။ ပါတီမထောင်တော့လည်းပဲ၊မင်းကိုနိုင်အုပ်စု၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းအုပ်စုတဲ့ဗျား။
သြော် အားလုံးကတော့မျှော်လင့်ထားကြတာပါလေ —————။
ခင်ဗျားလည်း တော်လှန်ရေးပါပြောပြီး ချောင်း ဟိုဖက်ကမ်းကူး ဖွဲ့နုလေး ဇကွဲလေး စားရ
ဗိုက်တင်းတာနဲ့ ဒီဖက်ကမ်းမှာ ချီးစားပြီးကြီးလာတဲ့ဘဝကိုမေ့
စားခဲ့ဘူးတဲ့ချီးကိုမှ အားမနာ လီးလိုလို မှိုလိုလို ပြောသလိုပေါ့
အားတော့မငယ်ပါနဲ့ စားခွက်သေးနဲ့ပန်းတာ ခင်ဗျားတစ်ကောင်တည်းမဟုတ်ပါဘူး
ငါလိုးမသားတွေ ထမင်းဝတာနဲ့ လီးစကားဘဲပြောတယ် ဘာဖြစ်သင့်တာနဲ့ ညာဖြစ်သင့်တာနဲ့
ပြောတမ်းဆို ခင်ဗျားလည်း တော်လှန်ရေးပါပြောပြီး လီး ဖြစ်လို့ ပြီးအောင်မလုပ်လား
( အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ နည်းနည်းမျှသွားအောင် တင်ထားတာပါ အတိုက်အခံရဲ့သဘောလေးပါ )
မကျေနပ်ရင် အကုန်လုံးဖျက် မျဉ်းမတားနဲ့
ကိုချစ်ရင်ထူး ဘရာကြော် တစ်ခု
ကိုအောင်ပု ဘရာကြော် တစ်ခု ။
မောင်တင် မောင်တင် ….
(မှတ်ချက်။ ရွှေမန်းတင်မောင်လေသံဖြင့်ဖတ်ပါရန်) …
Mandalay Gazette မှတာဝန်ရှိသူ(သူကြီး အပါအ၀င်)များသိစေဖို့နဲနဲပြောပါရစေ…
မတူသောအတွေး အရေးတွေကိုတော့ သူကြီးတို့ကြိူဆိုသလို ကျုပ်တို့လည်း ကြိုက်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ပုံမှန်မဟုတ်သောအတွေး အရေးကိုတော့ လက်မခံနှိင်ပါဘူး
ဥပမာ..သူများကထမင်းစားတဲ့အကြောင်း သူက မတူသောအတွေးနဲ့ ချီးစားတဲ့ အကြောင်း ရေးရင် M-G ကိုဝင်ဖတ်နေတဲ့သူတွေက အားယားလို့လာဖတ်နေတာမဟုတ်သလို M-G ကလဲ အပေါစားဆိုက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
ဒီလိုပို့စ်မျိုးဟာ ခပ်နိမ့်နိမ့်ရက်ကွက်ထဲက စကားလုံးတွေ အတွေးတွေ ရန်တွေ့ပုံမျိုး အဆင့်လောက်ဘဲရှိပါတယ်
ဒါမျိုးတွေ ဆိုက်ထဲမှာရှိနေရင် ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချီးရောသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်
ဆိုက်လဲ နာသလို ၀င်ဖတ်တဲ့သူအတွက်လဲ အချိန်ကုန် အကျိုးမရှိနှိင်ပါဘူး..
ကျုပ် M-G ကိုနေ့တိုင်းနီးပါး ၀င်ဖတ်တာ ၂ နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိနေပါပြီ ပို့စ် ၃ ခုလောက်နဲ့ ကော်မန့်လေးနဲနဲပါးပါး စိတ်ရှိသလိုတော့ဝင်ရေးဖြစ်ပါတယ်..ဖတ်တာကတော့ ပို့စ်အားလုံးနီးပါး ပါဘဲ..
အခုတော့ ခေါင်းစဉ်သာမက ပို့စ်တင်တဲ့သူကိုပါကြည့်ပြီး မဖတ်သင့်သူ ဖတ်သင့်သူ ခွဲရပါတော့မယ်
ဒါကြောင့် သူကြီး လဲ ဖျက်တန်ဖျက် ထုတ်သင့်ထုတ် လုပ်ဖို့ သင့်ပါတယ်
ူဒါကလဲ ကျုပ်ရဲ့ အတွေးသက်သက်နဲ့ အဆိုပြုရုံသက်သက်ပါ..
အောက်တန်းကျတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့အတွေးတွေပါသော ပို့စ်တွေ ဂေဇက်ထဲရှိနေရင်
စကားမစပ် ကိုအောင်ပု Comment ကိုဖတ်ရတာ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိလှသဗျာ…
သား လေး says:
ဗရာကြော် ကိုအောင်ပု ရေ
ဒီမှာဆက်ပေးမမန်းတော့ဘူး..။ အေးရော… :?